कुमारी बैंकको १७औं र १८औं साधारणसभा सम्पन्न
२०७६ बैशाख २९ गते , आईतवार प्रकाशित
कुमारी बैंक लिमिटेड आव २०७३/०७४ र आव २०७४/०७५ को वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष सन्तोष कुमार लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक विवरण, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, नाफा नोक्सान बाँडफाँट हिसाब, पूँजीमा भएको परिवर्तन लगायत वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गरेको हो ।
साधारण सभाले शेयरधनीहरुलाई आ.व. २०७३/०७४ को लागि १२.७५% बोनस शेयर र आ.व. २०७४/०७५ को लागि ८.५०% बोनस शेयर गरी जम्मा २१.२५ % बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यो बोनस शेयर जारी पश्चात् कुमारी बैंकको चुक्ता पुँजी रु. ८ अर्ब ६८ करोड हुनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्म बैंकले कुल निक्षेप रु. ७७ अर्ब २९ करोड परिचालन तथा कुल कर्जा रकम रु. ७३ अर्ब २४ करोड प्रवाह गरी संचालन मुनाफा रु.१ अर्ब ४२ करोड तथा रु.१ अर्ब खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिर गरि ८८ शाखा संजाल, ८३ एटिएम्, ३ एक्स्टेन्सन काउन्टरका साथै ३ वटा शाखारहित बैंकिङ्क इकाईमार्फत देशभरी आफ्ना सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सनराइज बैंकमा घरबाटै मुद्दती खाता खोल्न सकिने
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा गुगौलीका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण
कुमारी बैंकले प्रत्येक प्रदेशबाट १० लाखका दरले कोषमा रकम दिँदै